मध्यरातमा डा. केसी र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति, केसीले आज अनशन तोड्ने - Samudrapari.com
काठमाडौं – सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच शुक्रबार मध्यराति पाँचबुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा र केसीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै चौधौँपटक अनशन बसिरहेका केसी र स्वास्थ्यमन्त्री बोहराबीच चार घन्टा लामो छलफलपछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्नुभएको हो । राति ११ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिअनुसार शनिबार केसीले अनशन तोड्नुनेछ ।
केसी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिनमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको पुनर्वहाली र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामालगायतका माग राखी विगत पाँच दिनदेखि अनशनमा हुनुहुन्थ्यो । सहमतिसँगै केसीले शनिबार १० बजे अनशन तोड्ने स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले बताउनुभयो ।
अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था क्रमिक रूपमा बिग्रिदै गएको थियो । उहाँको उपचारमा खटिएका डा. अभिषेक सिंहका अनुसार केसीको शरीरका नसाहरू सुक्न थालेका छन् भने मुटुको धड्कन बढ्न थालेको छ ।
केसीको स्वास्थ्य निगरानीका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालले शुक्रबार मेडिकल टिम गठन गरेको थियो । केसीनिकट मानिने चिकित्सक डा. सुवास आचार्यको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय टिम गठन गरिएको अस्पतालका निर्देशक प्राडा. दीपकप्रकाश महराले बताउनुभयो ।
मेडिकल टिमले शुक्रबारदेखि नै केसीको नियमित स्वास्थ्य जाँच थालेको थियो । डा. आचार्यले केसीको स्वास्थ्य खस्किँदो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डा. केसीको मुटुको चालमा गडबड हुन थालेको छ । मुटुको घड्कन अन्य दिनको तुलनामा निकै छिटोछिटो चलिरहेको छ । पिसाबको मात्रा कम भए पनि सलाइन पानीका कारण पिसाबमा कुनै समस्या नरहेको उहाँले बताउनुभयो । केसीलाई २४ घन्टामा दुईवटा सलाइन पानी चढाइएको छ ।